Trends Marketing amin'ny haino aman-jery sosialy 2014 | Martech Zone
Toa vanim-potoana fialantsasatra lehibe ho an'ny Facebook ity, aiza 92% ho an'ny mpivarotra manantena ny handany ny ankamaroan'ny tetibolan'ny marketing ara-tsosialy! Amin'ny ankapobeny, ny mpanjifa dia antenaina handany 8% bebe kokoa amin'ity taona ity noho ny tamin'ny taon-dasa - $ 650 miliara. Ary ireo mpivarotra dia mijery ara-tsosialy tanteraka ho loharano lehibe hanitarana ny tsenany!
Efa akaiky ny vanim-potoanan'ny varotra Holiday 2014! Raha toa anay ianao dia efa eo am-piomanana mialoha ny fampielezan-kevitra amin'ny fialantsasatrao. Ka maninona raha mihemotra ary mandinika izay eritreretin'ny mpivarotra hafa amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity eo amin'ny fiaraha-monina? Ianaro hoe aiza no mampanjariam-bola ny mpivarotra, inona ny tambajotra mipoitra ho mpilalao herinaratra, inona ny tanjona voalohany amin'ny mpivarotra ho an'ny fiaraha-monina sy maro hafa. Rob Manning, Offerpop
Offerpop dia mampiasa ity infographic ity hanombohana programa mailaka vaovao ahafahan'ny mpivarotra misoratra anarana ary mahazoa aingam-panahy ara-barotra amin'ny vanim-potoana. Ny andiana atiny maimaimpoana dia hanome torohevitra sy fironana nomerika sy sosialy tokony ho fantatrao mandritra ny Zoma Mainty sy ny sisa. Makà infografika, tatitra momba ny fikarohana, drafitra marketing, mijery boky, ary maro hafa, mandritra ny taona.
Tags: torohevitra momba ny diabeta nomerikamarketing marketingfikarohana ecommercetoro-hevitra amin'ny mailakatoro-hevitra momba ny fialantsasatrafironana fialantsasatratolotrarob manningTorohevitra marketing amin'ny haino aman-jery sosialytorohevitra ara-tsosialy
Ahoana ny fahitan'ny mpivarotra anao mpamatsy automatique marketing?